Waxaad Weli ma garanayno: 5 Cool Features in Apple ma ku dhawaaqo in
On 8aad ee June ee sanadkan, Apple abaabulay ay in badan sugayeen Shirka Worldwide Horumarinta (WWDC) ee San Francisco. Inta badan la sugayay, maxaa yeelay, Apple ayaa la filayaa in ay la yimaadaan mid aad neefta-qaadashada iyo muhiim dhawaaqayo qaar ka mid ah ee la xiriirta ka uqaadineed dambeeyay sameeyey qalabka iyo software. Oo waxay u maleynayaa in waxa, waxa uu sameeyo in, by soo socda la astaanta ah macruufka cusub 9. Marxaladda gii qotomiyey munaasabadda kasoo muuqan astaamaha badan oo la macruufka 9 dhawaaqay, kuwa caan ah oo ay ku jiraan nidaamka helo "kadiska ah", Siri helitaanka xariifnimo, Spotlight helo awood iyo wixii la mid ah. Laakiin sugaan, waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah oo ku saabsan arrimo 9 oo Apple ma ku dhawaaqo (ama u badan tahay in aanay haysan waqti ku filan in). Halkan liiska dhammaan muuqaalada caan ah:
Waxa ay u muuqataa in Apple ayaa churned baxay habkaani gaar ahaan dadka isticmaala aaladaha yar yar macruufka awoodda isagoo, gaar ahaan kuwa la 8 GB ama 16 aaladaha GB. Marka aad soo degsado app ka dukaanka, App muujinta khafiifiya soo bixi doonaa oo kaliya jajabkii iyo qaybo ka mid ah kuwa app, taas oo qalab aad xamili karo. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaalayso iPhone 5, habkaani soo bixi doonaa oo kaliya kuwa qaybaha app ah, kuwaas oo si dhab ah loo baahan yahay si uu ugu tartamo app ku qalab aad. Tani doonaa badbaadin badan oo boos , ka saareen oo dhan titbits ee app ah oo aan loo baahnayn waxa fatten kor.
Ma kaliya aad ay dhaliyaan gool labaad cajiib ah in ciyaar kubada cagta aad u rajeeyay aad faana laga yaabaa oo ku saabsan ka dib si aad saaxiibadaa la clip? Waa hagaag, hadda suurtogal noqon in la muujinta Kit ku celiska ah ee macruufka 9 nidaamka, kaas oo uu si lama filaan ah oo aan looga dhawaaqay WWDC ee 2015. feature Tani waxay u ogolaaneysaa sameeysa ah si ay u qoraan clips ka mid ah gameplay halka aad la ciyaareyso. Oo waxaas oo dhan dhaca ee asalka ah, iyada oo aan dhibi aad waayo-aragnimo ciyaaraha mid yara. Sidoo kale, aad edit karaa clip aad qabtay gudahood app laftiisa. Hadda waxaad si fudud u wadaagi karaan video clips ka mid ah u dilay kaamil ah oo aad samayn, ama toosaa Home Run, oo dhan saaxiibo ku dhufto ee warbaahinta bulshada ee kala duwan. Ama si fudud ku filan, kaliya aad u badbaadin karto si aad disk si aad u daawato ka dib, marar badan (oo u badan tahay in aad adigu wac hanad a).
Keyboard kiiska Hoose
Tani waa mid ka feature ka dib markii reading ku saabsan oo, inta badan waxaad tegi doonaa, 'Ugu dambayntii ", iyadoo sheeko la mid ah gargaarka degdeg ah. Dhammaan waxa aad u isticmaala of 7 macruufka ah soo maray waqti adag qabsado keyboard qalab ee. Ilaa hadda, ee macruufka 7 keyboard loo isticmaalaa in lagu tusi doono oo dhan characters sida xarfaha by default, taasoo keenaysa 'wareer baahsan' ku saabsan haddii muhiimka ah shaqada isagoo ama aan. Laakiin hadda, iyada oo ay tani tweak yar oo update ah ee macruufka 9, waxa ay noqon doontaa gabi ahaanba cad in muhiimka ah shaqada ay gayso ama aan. Sidaas arrintan, "madmadowga wareeg-furaha 'dambeyntii yimaado in ku dhow ah.
Iyada oo macruufka 9, Apple ayaa si ballaadhan loogu soo shaqeeyey hagaajinta doorasho raadinta in qalab aad ka. Ugu horeyn, macruufka 9 wuxuu keenaa in ay 'Settings Search' doorasho, si fudud u heli goob ah in aad raadinayso. Waxa ay noqon mid aad waxtar yaraynta dadaal ah ee boggan agagaarka ficil ahaan meel kasta oo menu raadinta, si aad u hesho mid ka mid ah goob wixii u baahan yahay in la bedelo doonaa. Sidoo kale, raadi ayaa helay fursado ah baadi History App ah, Content Indexing isticmaalaya Barta bartamaha iyo Web Bogani. Tweak kale oo yar in habkaani waa 'Back to Raadi' doorasho oo si deg deg ah kaa caawinaysaa in aad si dib toosh isticmaalaysa, ka dib markii aad ayaa bilaabay app ah. Oo markay aad u hesho in ay bar Search ah, waxaa jira ee 'Back to App' doorasho iyo sidoo. Tani waa mid ka mid ah habka Apple doonayo inuu ku bixiyo qaar ka mid ah tartan adag in Google Hadda, marka ay timaado in baaritaan.
Waa hagaag, in ay feature kale kaas oo sida xaqiiqada ah in la soo dhoweeyey oo dhan isticmaala Apple. Iyada oo macruufka 9, aad gab karaa gariirka ee qalab aad wadajir. Hadda, ma digniinaha iyo farriimaha la kuwa vibrations xooggan aad cayayaanka kartaan. Just u hesho in ay Menu Helitaanka ah, oo noqon ku biiro gariirka si 'Off' ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad isticmaasho this mid ka mid ah daryeelka, maadaama ay tani si buuxda gab doonaa gariirka oo dhan farriimaha, oo ay ku jiraan kuwa u barnaamijyadooda iyo digniinaha xaaladaha degdegga ah. Xitaa macruufka laftiisa ku siinayaa digniin cadaalad ah inta aad ku jirtid waxaa garoonka, sida uu ku leeyahay, "Marka beddeliddaa off yahay, oo dhan gariir aad iPhone la naafo doonaa, oo ay ku jiraan kuwa u dhulgariir, tsunami iyo digniino kale oo deg deg." Waa hagaag, in muhiim ahaa!
Marka laga reebo waxyaabahan, waxaa jira kuwa yar ka badan caan ah in macruufka ah 9, taasoo Apple aysan at WWDC ah. Tusaale ahaan, Map Customization, sensor Profile, Wireless Car Play, toobiye Bar, Home Security Profile iyo wixii la mid ah.
Customization Map tusaale ahaan, wuxuu isticmaalaa Apple Maps inay kuu sheegaan wax walba oo jiho inay meesha ka tago in uu yahay in tareenka ku socda. Apple Maps waxaa ugu dambeyntii dooneysa qaababka ugu isticmaalay Google ee la macruufka ah 9.
Waa kuwee feature aadan ugu saabsan arrimo 9 jeclaan? Aan ogaano.
> Resource > macruufka > Waxaad Weli ma garanayno: 5 Features Cool in Apple ma ku dhawaaqo in macruufka 9